အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို ဦးတည်နေတဲ့ စူပါဆိုင်ကလုန်း အမ်ဖန် ပြင်းအားအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာ
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မုန်တိုင်းများအနက် အားအကောင်းဆုံးမုန်တိုင်း ဖြစ်လာပါတယ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို ဦးတည်ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အမ်ဖန်ဟာ ယခုအခါ မုန်တိုင်းပြင်းအား သတ်မှတ်ချက်များအနက် အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ပြင်းအားအဆင့် ၅ (Categor 5) မုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆိုင်ကလုန်းအမ်ဖန် (Cyclone Amphan) ဟာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းမှာ တည်ရှိနေပြီး အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၁၆၅ မိုင်ခန့်ဖြင့် တိုက်ခတ်နေပါတယ်။ အမ်ဖန်ဟာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်က ဩရိသမုန်တိုင်းပြီးလျှင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပထမဆုံး စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ ဩရိသမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့စဥ်က လူ ၉,၈၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဩရိသပြည်နယ်ကို တိုက်ရိုက်ဖြတ်သန်း တိုက်ခတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုစဥ်က မြန်မာ၊ ထိုင်းနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့မှာလည်း မုန်တိုင်းသက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မုန်တိုင်းများအနက် အားအကောင်းဆုံးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဆိုင်ကလုန်းအမ်ဖန်ဟာ ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ဂင်္ဂါမြစ် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အနီးကနေ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (မေ ၂၀ ရက်) မှာ ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်ထားပြီး အိန္ဒိနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့မှ သန်းနဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံတွေကို ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း CNN သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာ အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်များနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တောင်ပိုင်းနဲ့ အနောက်တောင်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသို့ ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခြင်းမပြုမီ အားလျော့နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ သို့သော် ကုန်တွင်းပိုင်းကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်စဥ် ဆိုင်ကလုန်းအမ်ဖန်ရဲ့ လေတိုက်နှုန်းဟာ တစ်နာရီလျှင် ၁၂၄ မိုင်အထိ အားကောင်းပြင်းထန်နေနိုင်ဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲ S.N. Pradhan က ပြောခဲ့ပါတယ်။
စူပါဆိုင်ကလုန်းကြောင့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းလည်း ၎င်းက သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ မြေနိမ့်ပိုင်းတွေမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဒေသခံတွေအနေနဲ့ မုန်တိုင်းဒီရေများ တက်ရောက်နိုင်မှုကို သတိပြုကြရန်လိုကြောင်း S.N. Pradhan က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အမ်ဖန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ
စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အမ်ဖန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမယ့် အခြေအနေမရှိသေးရာ မုန်တိုင်းသတိပေးချက်ကို အဝါရောင်အဆင့် သတ်မှတ်ထားကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက မေ ၁၈ ရက် ည ၁၁ နာရီအချိန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောထားပါတယ်။
အဆိုပါ မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် မေ ၁၈ ရက်မှ ၂၁ ရက်နေ့အတွင်း နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲမှ နေရာစိပ်စိပ် မိုးထစ်ချုန်း ရွာနိုင်‌ကြောင်း သိရပါတယ်။
စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အမ်ဖန်ရဲ့ အရှိန်ကြောင့် မိုးသက်လေပြင်းများ ကျရောက်ပြီး၊ လှိုင်းကြီးမယ့် အခြေအနေများကို မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိ ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေး သွားလာနေကြတဲ့ ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆိုးရွားတဲ့ မိုးလေဝသအခြေအနေများကို လေကြောင်းပျံသန်းရေးအနေဖြင့်လည်းကောင်း ကြိုတင်သတိပြုကြရန် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက အသိပေးထားပါတယ်။
ဆိုင်ကလုန်းအမ်ဖန် Cyclone Amphan